Simple and Easy for Everyone
Bee Choo Herbal Treatment consist of six simple steps toahealthy hair, which isaselling point to made many franchisee who have decided to venture into herbal treatment business with us. Unlie other business where becomesahassle to keep stock different types of treatments products, Bee Choo's methodology is to keep things simple with standard steps, bringing ease and seamless operations to our partners.
A customer steps in and sit down.
Step 1- Apply ginger wine
Step 2- Apply olive oil at ends (Female only)
Step 3- Apply Herbal Paste
Step 4- Wrap head
Step 5- Steam for 45mins
Step 6- Wash
The whole process takes approximately an hour. The fast treatment process also enablesahigh turn over rate which increases customer rate, and thus, leads to larger profit margins.
Training are provided for every franchisee including scalp analysis of individual customer and detailed training of daily operations needs to ensure you can run the business smoothly and successfully.
You will be provided with all marketing materials necessary to market the business inanew territory that are designed to attract and retain customers.
There are no age barrier to anyone who is not suitable for undergoing Bee Choo Herbal Treatment which make it very popular, with the right marketing, our partners seen profit in the 2nd month of business and started expanding to more outlet by the 2nd year of business.
Beechoo ဆံပင်ပေါင်းတင်ဆေးသည် ကျန်းမာသန်စွမ်းသော ဆံပင်ဖြစ်စေရန် အဆင့်(၆)ဆင့် ပါဝင်သည်။ အဓိကအချက်အလက်များအဖြစ် အဖွဲ့ဝင်များစွာ ဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ဤဆံပင်ပေါင်းတင်ဆေး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့် ချမှတ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဤစီးပွားရေးသည် အခြားစီးပွားရေးနှင့် မတူညီမှုမှာ ဆံပင်ပေါင်းဆေး၏ အမျိုးမျိုးသော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ သိုလှောင်မှုပြသနာမရှိခြင်း၊ Beechoo၏ နည်းပညာအရ အခြေခံအဆင့်များနှင့်အတူ ရိုးရှင်းသောနည်းစနစ်များ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ဝင်များ၏ စီးပွားရေးကို အလွယ်တကူ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
Customer တစ်ယောက်၏ ၀န်ဆောင်မှုအဆင့်များ
ပထမအဆင့် - Ginger Wine ထည့်ပေးခြင်း
ဒုတိယအဆင့် - သံလွင်ဆီနှင့် ဆံပင်၏ ထိပ်ဖျားကို ထည့်ပေးခြင်း
တတိယအဆင့် - ဆံပင်ပေါင်းတင်ဆေး ထည့်ပေးခြင်း
စတုတ္ထအဆင့် - ဦးခေါင်းထုပ်ပေးခြင်း
ပဉ္စမအဆင့် - ၄၅မိနစ်ခန့် ပေါင်းတင်ပေးခြင်း
ဆဌမအဆင့် - ခေါင်းလျှော်နိုင်သည်။
ခန့်မှန်းခြေအရ အားလုံးသော လုပ်ငန်းစဉ်ကို တစ်နာရီခန့် အချိန်ပေးရသည်။ မြန်ဆန်သော ဆံပင်ပေါင်းတင်ခြင်းဖြစ်စဉ်အရ ဈေးနှုန်းကိုလည်း အထောက်အကူပြုပြီး customerများ၏ ဈေးနှုန်းကိုလည်း တိုးမြင့်စေသည်။ ထို့ကြောင့် များစွာသော အကျိုးအမြတ်ပမာဏကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
လေ့ကျင့်ပေးခြင်းသည် အဖွဲ့ဝင်အားလုံးအတွက် များစွာအထောက်အကူပြုပေးသည်။ Customer တစ်ယောက်ချင်းစီ၏ ဦးရေပြားစမ်းသပ်ချက်လည်း ပံ့ပိုးသည်။ အသေးစိတ်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းသည် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နေ့စဉ်လိုအပ်မှုများကို သေချာအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့် သင်၏စီးပွားရေးကို ချောချောမွေ့မွေ့နှင့် အောင်အောင်မြင်မြင် ကျော်လွှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဈေးကွက်စီးပွားရေးအရ မိမိ၏နယ်မြေသစ်အတွင်းသို့ လိုအပ်သော ဈေးကွက်ပစ္စည်းများကိုလည်း ပံ့ပိုးမှုများရှိရမည်။ Customers များဆွဲဆောင်မှုနှင့် စိတ်ဝင်စားမှုရှိအောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်းရှိရမည်။
Beechoo ဆံပင်ပေါင်းဆေးသည် အသက်အရွယ်အလိုက် ဟန့်တားထားခြင်းမရှိပါ။ မည်သူမဆို သင့်လျော်ပါသည်။ ကျော်ကြားမှုရှိခြင်းနှင့် မှန်ကန်သောဈေးကွက်များကို Beechoo ဆံပင်ပေါင်းဆေးမှ ပြုလုပ်ပေးနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့ဝင်ထဲမှ ဤစီးပွားရေးကို ၂လအတွင်း အကျိုးအမြတ်များစွာ မြင်ရခြင်းနှင့် ဤစီးပွားရေးကို ၂နှစ်အတွင်း ဆိုင်ခွဲသစ်များ စတင်တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်သည်။